6 nzira dzekudyara dzekuvandudza ino zhizha | Ehupfumi Zvemari
Iri zhizha rinogona kunge riri rekupedzisira nemitero yepasi yakaderera munzvimbo ye euro, sekureva kwe European Central Bank (ECB). Maziso ese achange akatarisana nekupera kwegore kuti vazive danho ravachaita maringe nemutemo wavo wezvemari, kunyange hazvo zviratidzo zvichiratidza kuti nguva ine mari yakachipa inogona kunge yasvika pakupera. Uye zvingave zvishoma sei, sarudzo iyi inofanirwa kuendeswa kumisika yemari pamwe nekukurumidza kupfuura zvinotarisirwa nevaongorori vezvemari. Nechitarisiko cheye nyowani bhizinesi mikana iwe yaunofanirwa kutora mukana kubva ikozvino.
Izvi zvinoitika zvinokanganisa kuti ino chirimo yatinozotanga haisi imwe. Pane zvinopesana, chichava chimwe chinhu chakasiyana uye mune chero zvazvingava, iwe unenge usina imwe sarudzo asi kuve wakagadzirira kupfuura nakare kose kuti uite maitirwo ako mumisika yemari. Mushure memesester yekutanga yegore iyo zvave nani pane zvaitarisirwa uye izvo zvinopera nechiratidzo chidiki chakanaka mushure memakotesheni achangoburwa mumisika yenyika neepasi rese. Kutarisana nehafu yekupedzisira yegore nedosi yakakura ye positivism.
Zvisinei, zhizha rino unogona kutora akateedzana marongero ekudyara anogona farira zvaunofarira iwe pachako mukati memwedzi iyi inokosha. Nekuti zviripo, kana iri zhizha richazo kuverengerwa kune chimwe chinhu, imhaka yekuti inogona kunge yakasiyana neyakange apfuura. Uye nekudaro iwe unofanirwa kusiyanisa marongero ako ekuita iyo capital iwe yauinayo yekudyara munguva ino yegore inobatsira. Uine chinangwa chimwe chete uye ichocho hachisi chimwe kunze kwekuwedzera purofiti iwe yaunogona kugadzira mune yako sechengetedzo portfolio kubva zvino zvichienda mberi.
1 Strategies: lagged tsika
2 Unganidza mari inowanikwa
3 Zhizha dividend mvura
4 Kutiza chikamu chebhengi
5 Siya bhegi muzhizha
6 Enda kumamwe misika
Strategies: lagged tsika
Imwe nzira iyo iwe yaunogona kushandisa kubva ikozvino kuenda mberi kutsvaga masheya akasara zvakanyanya muhafu yekutanga yegore. Hazvishamisi kuti vamwe vacho vane upside zvinogona Yakakwira uye mune chero mamiriro ezvinhu inonakidza kwazvo kuvaisa mune yako inotevera yekudyara portfolio. Asi kutora chengetedzo uye ndezvekuti hunyanzvi hwayo hwenyanzvi haina kunyanya kushatiswa semhedzisiro yekudzika yakadzika kufamba iyo inodzivirira iyo kubva kuchinjisa maitiro ano mwaka wezhizha watinozotanga.
Kune rimwe divi, zviri nani kuti iwe uvhure zvinzvimbo mumakambani akanyorwa asina kutyora yavo technical technical. Nekuti kana iwe uchizviita nenzira yakapesana, hapana mubvunzo kuti unozvipinza panjodzi yekuva nechitsva uye chine njodzi pasi kufamba mauri unogona kurasikirwa maeuro mazhinji munzira. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Mune chero zviitiko zvacho, ivo vanofanirwa kuve mashandiro anotarisirwa kune pfupi pfupi nguva. Ingori mwedzi iyo zhizha inogadzirwa.
Unganidza mari inowanikwa
Imwe yemaitiro iwe aunogona kushandisa ino yezhizha, kana iwe uine zviripo muzvikwereti mukati memwedzi mitanhatu yekutanga yegore iri bvisa zvinzvimbo. Ese kuburikidza nekutengesa zvishoma kana zvakakwana kuitira kuti iwe ugone kunakidzwa nemari inowanikwa mumwedzi iyi yekuzorora uye zororo. Pamusoro pezvo, unogona kuve mubairo wako usingatarisirwi wekuita rwendo irworwo rwawaishuvira zvakanyanya uye kuti kusvikira zvino wanga usingakwanise kuita. Mupfungwa iyi, misika yemari inogona kukupa iwe mari yaunoda kuti uite.
Iyi yekudyara system zvakare inokutendera iwe kuti usadaro unogona kupinda mutsvuku munzvimbo dzako dzakavhurika muchikamu chechipiri chegore. Nepo kune rimwe divi, iwe uchave unoteerera kupfuura nakare kose kune mikana mitsva yebhizinesi iyo iyo misika yequity ichakupa iwe mumwedzi iyi. Kune rimwe divi, uye sevashambadzi vane ruzivo rwakawanda mumisika yemasheya vanowanzo taura, zvinogara zvichisarudzika "shiri iri muruoko pane zana rinobhururuka". Isa iri zano rinobatsira mune zvako zvekudyara zvegore rino. Zvirinani iwe unodzivirira mamwe matambudziko mukutengesa pamusika wemasheya.
Zhizha dividend mvura
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa pasi pechinhu chero chipi zvacho kuti ino inguva yegore umo kugoverwa kwezvikamu kune vagovana zvakawandisa. Mwedzi yezhizha inoshandiswa nemakambani akanyorwa kupa uyu mubairo. Nezve kudzoka kwegore izvo iri pakati pe5% ne7% dzinenge uye pamusoro pechikwereti chinogadzirwa kubva kune akasiyana mabhanga zvigadzirwa. Semuenzaniso, yakatarwa-nguva dhipoziti, mabhizinesi emakambani kana maakaundi ane mari yepamusoro ayo asingatombo kupa mubereko wakakwirira kupfuura 1%
Ino nguva yegore inogona kushandiswa kwauri kuti usarudze iyi kirasi yemakambani ayo achapa zvakanyanya kuzvidzivirira kune ako ekudyara uye mukana we kuvaka yakagadziriswa mari yemari mukati memusiyano. Chero chii chinoitika mumisika yemari mumwedzi iri kuuya. Uye zvakare ichave nzira yekutanga yekukuchengetedza kubva kusagadzikana kuri kuita misika yezvemari mumwedzi iyi. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kuenda wakadzikama kunoshandisa zororo nevako vaunoda uye pasina kunetsekana kukuru maererano nehukama hwako nebazi rekudyara.
Kutiza chikamu chebhengi
Hapana mubvunzo kuti rimwe remapoka anopokana mukati memwedzi yezhizha ndiyo inomiririrwa nemabhangi. Iyo ndiyo inonyanya kunetseka pasarudzo dzinogona kutorwa kubva kuEuropean Central Bank (ECB), uye nekudaro inogona kusimukira kurasikirwa kwakanyanya kupfuura mune zvimwe zvikamu zvemusika wemasheya. Chinhu chinonyanya kurairwa ndechekuti iwe dzivisa kuvhura nzvimbo munzvimbo ino panguva ino yegore. Kuitira kuti iwe usave nekumwe kushamisika kwakashata panguva yezororo rako rakamirirwa kwenguva refu. Hazvishamisi kuti mamwe emitengo yawo akanyudzwa mune yakajeka nzira yekudzika kubva panguva dzese dzekusingaperi: pfupi, pakati nepakati.
Uye zvakare, haisi iyo inonyanya kukosha chikamu kuvhura zvinzvimbo pamberi pe volatility Vari kuratidza zviito zvavo mune izvi uye kunyangwe mumwedzi gumi nembiri yekupedzisira. Mune ino pfungwa, iko kuderera uko Banco Sabadell anga ave nako muhafu yekutanga yegore hakugone kuenda kusingaonekwe. Iko kwazvakatungamira kukosheswa kwayo kwatova pasi peyuniti yuniti uye zvakakonzera varimari vadiki nepakati kurasikirwa nemari yakawanda muzvinzvimbo izvi mubazi rezvemabhanga. Chikonzero chakaringana kusakwana kune ino chikamu chemusika wemasheya, zvirinani kwemamwe mashoma mwedzi.
Siya bhegi muzhizha
Pakati pemwedzi yekuzorora iyi, zano rakanaka nderekutiza kubva kumisika yemari. Kuenda kuzvigadzirwa zvakapusa uye izvo zvinogona kupa runyararo rwepfungwa panguva ino yegore. Iine kushoma kwekudzoka kwakatenderedza 1%, asi nenzira yakavimbiswa zvachose uye pasina iwe kugona kuwana kurasikirwa kwerudzi rupi zvarwo. Nezvigadzirwa semumiriri senge yakatarwa-temu bhangi dhipoziti uye kuti parizvino unogona kuvabvumidza kwenguva yetatu yemakore Iyo chaiyo nguva iyo mwaka uno wegore unopera uye iyo inoshanda sekukwereta mari iwe uchipedza yako zororo kune imwe nzvimbo. Kuve kune rimwe divi, chigadzirwa chisina makomisheni uye zvimwe zvinoshandiswa mukutungamira kana kugadzirisa.
Iyi nzira yekudyara inoshanda kwazvo kuti iwe uve dzikama mazuva ano ekuzorora Uye iwe haufanire kunetseka nezve mitengo iri pamisika yemari. Ichi chiyero chenguva pfupi asi chinogona kushanda zvakanyanya mukuchengetedza nzvimbo dzako dzemari kubva ikozvino. Iko kwausingazofaniri kutora chero mhando dzenjodzi sezvo iri yakajeka nzira yekuchengetedza iyo yakavhurika kune ese profiles ayo madiki nepakati varimi varipo. Pamusoro pehumwe hwokufunga huchave musoro wenyaya yechimwe chinyorwa.
Chekupedzisira, ratidza kuti imwe yetsigiro iwe yaunofanira kuzvidzivirira kubva pazviitiko zvisingadiwe mumisika yemari inoenderana nemamwe misika. Semuenzaniso, iyo ye nhumbi dzinokosha iyo parizvino inoratidza yakanaka kwazvo yehunyanzvi chimiro. Kunyangwe pane zvinopesana, njodzi dzakanyanya kukwirira kupfuura mune zvimwe zvirevo zvekudyara. Nekuti kusagadzikana kwayo kwakanyanya uye kunogona kutungamira kune yakaipa kutamba munzvimbo dzako mumusika uno unokosha.
Kune rimwe divi, hapana mubvunzo kuti iwe unofanirwa kupa chiitiko chakakura mumhando iyi yekushanda sezvo misika yavo ichisiyana neyakajairika. Kana iwe usingaite maererano nechinodiwa ichi, zvichave zviri nani kuti iwe urege kuita chero rudzi rwekuvhiya. Hazvishamise kuti iwe uchave nemukana uri nani wekusiya maeuro mazhinji munzira. Uye ichi chinhu chaunofanirwa kudzivirira kunyanya mumwedzi ine njodzi kumisika yese yequity. Seimwe yezvinangwa zvako zvikuru mumazano aunofanira kutora munguva ino yegore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » 6 nzira dzekudyara kusimudzira ino chirimo